Warshad Meter Multifunctional Power Meter - Soosaarayaasha Mileteriga Awoodda Badan, Shirkadaha Alaabada
KF932 IEC61850 Tijaabiyaha Relay
K68i Dejinta Tijaabada Universal Relay
KF900A Sirdoonka La qaadan Karo ...
K2063i Tijaabada Universal Relay ...
Saddexda Weji Shabakad Mileteriga Awoodda badan leh ee IP52 / 0.05Hz PMC180NS
Nidaamka AC ee Hal / Saddex Waji ah
Falanqaynta Tayada Awooda
Taxane PMC96 mitir saddex-waji kormeer koronto
Taxane PMC96 sedex waji mitir dabagal koronto wuxuu qaataa shaashadda nooca LCD shaashadda 、 qurux badan oo weyn contrast sare; Iyada oo processor-xawaare sare leh sida udub-dhexaadka, cabbiraadda xuduudaha korantada iyadoo la adeegsanayo 22 AD, qiyaasta tamarta korantada, kala duwanaansho ballaaran oo ballaaran, saxnaan sare. Ikhtiyaar ahaan ma u habeyn karaa binary various relay module RS-485 moduleka isgaarsiinta, wuxuu si fudud u buuxin karaa isdhexgalka nidaamyada kala duwan ee caqli qaybinta.
Taxanaha PMC72 Saddex-waji Meter Monitoring Meter
Taxanaha PMC72 sedexda waji ee mitirka kormeerka korantada wuxuu qaataa shaashadda nooca LCD shaashadda 、 qurux badan oo weyn contrast sare; Iyada oo processor-xawaare sare leh sida udub-dhexaadka, cabbiraadda xuduudaha korantada iyadoo la adeegsanayo 22 AD, qiyaasta tamarta korantada, kala duwanaansho ballaaran oo ballaaran, saxnaan sare. Ikhtiyaar ahaan ma u habeyn karaa binary various relay module RS-485 moduleka isgaarsiinta, wuxuu si fudud u buuxin karaa isdhexgalka nidaamyada kala duwan ee caqli qaybinta.
EngyBrick Qeybinta Module Kormeerka Awooda Sirdoonka
Nidaamka 'EngyBrick System' wuxuu ku saabsan yahay xalka qaybinta awoodda qaybinta awoodda, kuwaas oo u heellan inay ka caawiyaan macaamiisha hagaajinta waxtarkooda shaqo iyo inay si weyn u yareeyaan miisaaniyaddooda iibsashada hantida iyo qiimaha rakibaadda, iyagoo siinaya dadka isticmaala habka ugu habboon ee rakibaadda ugu habboon iyo qaabka ugu habboon ee waqtiga lagu badbaadinayo. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay helitaanka calaamadaha isgaarsiinta & kormeerka danab, kormeerka hadda jira laba qaybood. Nidaamku wuxuu qaataa habka korontada basaska madaxa-bannaan, dekedda RJ45 oo isku xireysa qayb kasta oo ka mid ah qaybaha. Hawlgalkeedu wuxuu qaataa qaab hal-fure u ah qaabeynta cinwaanka berrinka. sidoo kale waxay ku habeyn kartaa xuduudaha iyo qaabka shaqada ee moduleka iyada oo loo marayo shaashadda muujinta.
PMC200S Mater Power Multifunctional
PMC200 Power Parameter Tester waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa nidaamka maareynta tamarta, otomatiga otomaatiga, isugeynta shabakada otomaatiga, qeybinta awooda qeyb hoosaadka, otomaatiga warshadaha, dhismaha caqliga, badhanka caqliga leh, golaha wareega, iwm. Wuxuu isku daraa dijitaalka, garashada iyo isku xirka wadajirka, si loo badalo qalab dhaqameed sida qalabka wax soo gudbiyaha tirada, korontada, qalabka soo bandhigida tirada, unugga helitaanka xogta iyo falanqeeyaha rikoodhka, iwm. Ujeeddooyinka badan ayaa hoos u dhigaya qiimaha, iyo isku xirka siligga fudud wuxuu fududeynayaa baaritaanka.
Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Tijaabada gudbinta, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Dhammaan Alaabooyinka